Izibonelelo zomhlala-phantsi zikaMongameli azizange zibe khona kude kubekwe umthetho woMongameli wangaphambili (FPA) ngo-1958. Ukususela ngoko, iintlawulo zomhlala-phantsi zika-ofisi zibandakanya umhlala-phantsi wonyaka, abasebenzi kunye nezibonelelo zeeofisi, iindleko zokuhamba, ukhuseleko lweenkonzo ezifihlakeleyo kunye nokunye.
Oomongameli bamandulo banikezwa umhlala-phantsi wokuhlawula umvuzo wonyaka olinganayo nomyinge wonyaka wokuhlawula ngokusisiseko kubaphathi beSebe lezeNtloko, njengabaNobhala beKhabhinethi .
Le mali isetyenziswe rhoqo yiNgqungquthela kwaye okwangoku (2016) i $ 205,700 ngonyaka. Umhlala-phantsi uqala ngomzuzu umongameli oshiya ngokusemthethweni i-ofisi emini ngosuku lokuSungulwa koSuku. Abahlolokazi babengumongameli banikezwa i-$ 20,000 yepensenti yomhlala-phantsi wonyaka kunye namalungelo okuposa ngaphandle kokuba bakhethe ukunqanda ilungelo labo kumhlala-phantsi.
Ngowe-1974, iSebe lezoBulungisa ligweba ukuba abaongameli bashiya isikhundla phambi kokuba iimeko zabo ezisemthethweni ziphelelwe lixesha banelungelo lokufumana umhlala-phantsi omnye kunye neenzuzo ezongezelelwe abanye abawongameli. Nangona kunjalo, oomongameli abasuswe kwiofisi ngenxa yokuphambuka kwempahla banokulahlekelwa zonke izibonelelo.
Kwiinyanga ezisixhenxe zokuqala, ukuqala inyanga enye ngaphambi kokuvulwa kweJanuwari 20, abaye bawongameli bafumana inkxaso-mali yenguqu yokubanceda ukuba batshintshele ebomini babucala. Kuyavunywa phantsi koMthetho woTshintsho woMongameli, imali ingasetyenziselwa indawo yeofisi, isinxephezelo sabasebenzi, iinkonzo zonxibelelwano kunye nokushicilela kunye nokuthunyelwa kweefayili ezihambelana nokutshintsha.
Isixa esinikeziwe senziwa yiCongress.
Abasebenzi kunye nezibonelelo zeeHhovisi
Kwiinyanga ezintandathu emva kokuba umongameli ashiya iofisi, ufumana imali yabasebenzi beeofisi. Kwiinyanga ezingama-30 zokuqala emva kokushiya i-ofisi, umongameli wangaphambili ufumana i-150,000 ngonyaka ngonyaka. Emva koko, uMthetho woMongameli wangaphambili uchaza ukuba intlawulo yesibonelelo semisebenzi yoMongameli wangaphambili ayinakudlula i-$ 96,000 ngonyaka.
Naliphi na iindleko zabasebenzi ezongezelelweyo kufuneka zihlawulwe ngabanye ngabangumongameli wangaphambili.
Oomongameli bamandulo bahlawulwa kwiindawo zeofisi kunye neefisi kwiindawo apho e-United States. Iifowuni zeendawo zangaphambili zee-ofisi kunye nezixhobo zigunyazwa ngonyaka yiCongress njengenxalenye yohlahlo lwabiwo-mali lwe-General Services Administration (GSA).
Ngaphantsi komthetho owenziwe ngo-1968, i-GSA yenza imali ifumaneke kubengumongameli kunye nabangaphantsi kwebini labasebenzi bayo ngeendleko zokuhamba kunye nezihambelanayo. Ukuhlawulelwa, uhambo kufuneka luhambelane nesimo saloo owayesakuba ngumongameli njengommeli osemthethweni waseburhulumenteni baseUnited States. Ngamanye amazwi, uhambo lokuzonwabisa aluhlawulwanga. I-GSA inquma zonke iindleko ezifanelekileyo zokuhamba.
Khu seleko lweNkonzo
Ngokumiselwa koMthetho woKhuselo woMongameli wangaphambili ka-2012 (HR 6620), ngoJan 10, 2013, ababengumongameli kunye nabatshatileyo babo bafumana ukukhuselwa koNcedo lweMfihlo kwixesha labo lokuphila. Ngaphantsi koMthetho, ukukhuselwa kwabatshatileyo babengumongameli banqumla kwisiganeko sokutshata kwakhona. Abantwana babengumongameli bafumana ukhuseleko baze bafikelele kwiminyaka eyi-16.
UMthetho woKhuselo woMongameli wangaphambili ka-2012 waguqula umyalelo owenziwe ngo-1994 owawuphelisa ukukhuselwa koNgcaciso lwaBasebenzi be-Presidents iminyaka engama-10 emva kokushiya i-ofisi.
AbaPhathi boMdala kunye nabafazi babo, abahlolokazi kunye nabantwana abancinci banelungelo lokonyango kwizibhedlele zempi. Abengumongameli kunye nabaxhomekeke kubo banakho ukhetho lokubhalisa kwizicwangciso ze-inshorensi zempilo zabo ngasese ngeendleko zabo.
Oomongameli bamandulo bafumana imingcwabo yombuso kunye nembeko yezempi. Iinkcukacha zomngcwabo zisekelwe kwiminqweno yentsapho yomongameli wangaphambili.
Umzamo ohlukileyo wokunciphisa umhlala-phantsi woMongameli
Ngo-Ephreli 2015, iCongress yadlulisela ibhili-mali enesihloko esithi: UMthetho woMongameli woLwabiwo-mali woMongameli, owawube wathintela iipenshoni zabo bonke abaye bangaphambili kunye nabangaphambili bangama-$ 200,000 kwaye basuswe ukubonelelwa kwangoku kuMthetho woMongameli wangaphambili oxhumanisa umhlala-phantsi womongameli kumvuzo wonyaka wabalobi beKhabhinethi .
Umthetho osayilwayo uza kuyancitshisa nezinye izibonelelo ezihlawulwe kubabeengameli. Iipenshini zonyaka kunye nezibonelelo ziza kufikelela kumyinge ongaphezu kwama-400,000.
Nangona kunjalo, ngoJulayi 22, ngo-2016, uMongameli uBarack Obama wavusa i-bill ethi "iya kubangela umthwalo ongenangqiqo kwaye ungenangqiqo kwiiofisi zangaphambili zangomongameli." Kwi-release release, iNdlu ye-White yongezelela ukuba u-Obama naye wayechasene nemimiselo yowiso-mthetho "kuya kupheliswa ngokukhawuleza umvuzo kunye nazo zonke izibonelelo kubasebenzi abenza imisebenzi esemthethweni babengumongameli-beshiya ixesha okanye indlela yokuba batshintshe kwenye i-payroll."
I-PHILLIPS Igama lomnqophiso kunye nembali yentsapho
I-Cameron University Admissions
I-Tel Telle Tels Telles: I-French Adjective ne-Pronoun
Kubalulekile Django Reinhardt Playlist
Isiseko se-Kayaking Basics: Iingcebiso kunye neNyathelo
Iimiboniso eziphilileyo zonyaka ka-2008?
Apho Izinto ZaseWild Ziyi-Maurice Sendak
I-Ocher - I-Pigment ye-Oldest Known Natural World